XOG: Wax Ka Ogow Laba Arrimood Oo Farmaajo Uu U Aadayo Dalka Qadar | Raxanreeb.net
XOG: Wax Ka Ogow Laba Arrimood Oo Farmaajo Uu U Aadayo Dalka Qadar
Wararka Warbaahinta Raxanreeb ka heshay ilo u dhow dhow Madaxtooyadda Villa Somalia ee magaaladda Muqdisho ayaa sheegaya in Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo uu socdaal ugu ambabixi doono dalka Qadar 13da March 2019.
Socdaalka Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu salka ku hayo arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka siyaasadeed ee Labada dal iyo sidii ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliya uu galaangal ugu yeelan lahaa isticmaalka Bangiyadda dalka Qadar.
Tallaabadan ayaa u muuqaneysa mid DFS ay dooneyso inay xiddidada si tartiib tartiib ah ugu siibto xiriirkii ganacsi iyo dhaqaale ee kala dhexeeyey mudadda dheer dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo toddobaadkan ay dowladda Soomaaliya si adag isaga hor-yimaadeen heshiiska dekedda Berbera ee Shirkadda DP World ay faraha kula gashay dhiiri gelinta kala qaybsanaanta dalka Soomaaliya.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale waxay saami dhadhan fiican leh ay ka siisay dakhliga dekedda Berbera dowladda Itoobiya taasoo shacabka Soomaalidu ay u arkeen in Imaaraadku ay dalka Soomaaliya qayb ka mid ah u gacan geliyeen dowlad caddow u ah ummadda iyo waddanka Soomaaliya.
Haddaba, iyadoo xilliyadan danbe ay dalka Imaaraadka Carabtu si isdabajoog ah ula kulmayey guul darro siyaasadeed oo kaga imaaneysay dalal ay horay saaxiibo u ahaayeen oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Jabuuti, Bakistaan, Soomaaliya iyo waddamo oo badan oo kale, waxaana safarka Madaxweyne Farmaajo uu ku tegayo dalka Qadar noqon doonaa mid niyad jab ku ridi doonta dalka Imaaraadka Carabtu danihii faraha badnaa ee ay Soomaaliya ka damacsanaayeen.
Dowladda Qadar oo ah waddan aad u yar balse leh dhaqaale farabadan oo ay ka helaan shidaalka & Gaaska dabiiciga ah ayaa siyaasadda Soomaaliya waxay si dhow ugu soo milatay Labadii sanno ee ugu danbeysay, waxaadna moodaa inay guulo fara badan ka gaareyso danaha siyaasadeed ay dalka Soomaaliya ay ka leedahay.
Balse, dalka Imaaraadka Carabta oo la rumeysan yahay inuu jiray xiriir qoto dheer oo u dhexeeyey iyaga iyo Soomaalida, isla markaasna ah dad si fiican u yaqaan taariikhda ummadda Soomaaliyeed, waxaana jiray xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed oo weligood ka dhexeeyey.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaan ciddina inkiri karin in dhaqaale fara badani uu kaga baxay goboladda dalka Soomaaliya qaarkood, dhaqaalahaasoo wax badan ka badan midka ay dowladda Qadar bixisay ama bixin doonto sanadaha soo socda.
Dadka dhaliila dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheega in ay u kaceen wiilal yar yar oo ku koray Caano Maraaci kuwaasoo u guntaday inay dunida oo dhan dab ku shidaan isla markaasna ay iyagu ka badbaadaan, balse kuleylka dabkaasi uu iminka maradooda taabtay.
Arrimahan oo dhami waxay dhaliyeen in dalka yar ee Qadar uu si weji gabax ah uga riixday dalka Imaaraadka Carabta Qasrigii iyo taariikhdii fogeyd ee uu Soomaaliya ku dhex lahaayeen.
Wafdiga Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa ka mid ah Agaasimaha Madaxtooyadda Soomaaliya Fahad Yaasiin oo runtii ah horgalka dalka Qadar iminkana soo dhiraandhiriyey inuu Madaxweyne Farmaajo casumaad deg deg ah uga keeno dalkaas, taasoo jawaab looga dhigayo haddaladii Amiirka Imaaraatiga ee shirkadda DP World Suldaan ahmed.